Ukubikezelwa kukaGartner kweTop 10 Technologies yango-2011 | Martech Zone
Kufunda okuthakazelisayo Ukubikezela kukaGartner kobuchwepheshe obuphezulu be-10 bango-2011… Nokuthi cishe konke ukubikezela okukodwa kukuthinta kanjani ukumaketha kwedijithali. Ngisho nentuthuko ekugcinweni nasehardware inamthelela ezinkampanini zezinkampani zokuxhumana noma zokwabelana ngolwazi namakhasimende namathemba ngokushesha nangempumelelo.
I-Top Ten Technologies yango-2011
Cloud Computing - Izinsizakalo ze-Cloud computing zikhona nge-spectrum kusuka emphakathini ovulekile kuya kwangasese evaliwe. Eminyakeni emithathu ezayo kuzonikezwa ukulethwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zezinsizakalo zefu eziwela phakathi kwalezi zinhlaka ezimbili. Abathengisi bazonikela ngokusetshenziswa kwamafu okuyimfihlo okuhlanganisiwe okuletha ubuchwepheshe benkonzo yamafu yomphakathi yomthengisi (isoftware kanye / noma ihadiwe) nezindlela (okungukuthi, izindlela ezinhle kakhulu zokwakha nokuqhuba insiza) ngendlela engasetshenziswa ngaphakathi kwebhizinisi lomthengi. Abaningi bazophinde banikeze izinsizakalo zokuphatha ukuphatha kude ukuqaliswa kwensizakalo yamafu. UGartner ulindele ukuthi amabhizinisi amakhulu abe nethimba elinamandla lokuthola ulwazi ngo-2012 elibhekele izinqumo nokuphathwa okuqhubekayo kwamafu.
Izicelo Zamaselula Namathebulethi Wezindaba - UGartner ulinganisela ukuthi ekupheleni konyaka ka-2010, abantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.2 bazobe bephethe izingcingo eziphathwayo ezinekhono lezentengiselwano ezicebile, ezingamaselula ezinikeza indawo ekahle yokuhlangana kokuhamba kanye neWebhu. Amadivayisi eselula aba ngamakhompyutha ngokwawo, ngenani elimangazayo lokusebenzisa ikhono kanye ne-bandwidth. Sekuvele kunamakhulu ezinkulungwane zezicelo zamapulatifomu afana ne-Apple iPhone, ngaphandle kwemakethe elinganiselwe (kuphela yesikhulumi esisodwa) kanye nesidingo sokufaka amakhodi okuhlukile.
Izinga lokuhlangenwe nakho kwezicelo kulawa madivayisi, elingasebenza indawo, ukunyakaza nokunye okuqukethwe ekuziphatheni kwabo, liholela amakhasimende ukuthi ahlanganyele nezinkampani ngokukhetha ngamadivayisi eselula. Lokhu kuholele emncintiswaneni wokukhipha izicelo njengethuluzi lokuncintisana lokwenza ubudlelwano futhi lithole inzuzo kunabancintisana abanezikhombisi ezisuselwe kusiphequluli kuphela.
Ukuxhumana Komphakathi Nokusebenzisana - Imithombo yezokuxhumana ingahlukaniswa: (1) Inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi - imikhiqizo yokulawulwa kwephrofayili yomphakathi, efana ne-MySpace, i-Facebook, i-LinkedIn ne-Friendster kanye nobuchwepheshe be-social networking analysis (SNA) obusebenzisa ama-algorithms ukuqonda nokusebenzisa ubudlelwano babantu ukuthola lokho labantu nobungoti. (2) Ukubambisana kwezenhlalo — ubuchwepheshe, obufana nama-wikis, ama-blogs, ukuthumela imiyalezo ngokushesha, ukusebenzisana kwehhovisi nokuxhunyanwa nabantu. (3) Ukushicilela kwezenhlalo -ubuchwepheshe obusiza imiphakathi ekuhlanganiseni okuqukethwe ngakunye endaweni yokugcina nokusebenziseka komphakathi efana ne-Youtube ne-flickr. (4) Impendulo yomphakathi - ukuthola impendulo nemibono evela emphakathini ngezinto ezithile njengoba kufakazelwe ku-Youtube, i-flickr, i-Digg, iDel.icio.us, ne-Amazon. UGartner ubikezela ukuthi ngo-2016, ubuchwepheshe bezenhlalo buzohlanganiswa nezinhlelo eziningi zebhizinisi. Izinkampani kufanele zihlanganise ndawonye i-CRM yazo yomphakathi, ukuxhumana kwangaphakathi nokusebenzisana, kanye nezinhlelo zomphakathi zomphakathi zibe isu elihlanganisiwe.
Ividiyo - Ividiyo akuyona ifomu lemidiya entsha, kepha ukusetshenziswa kwayo njengohlobo olujwayelekile lwemidiya olusetshenziswa ezinkampanini okungezona ezabezindaba kuyanda ngokushesha. Izindlela zobuchwepheshe ezithwebula izithombe ezidijithali, i-electronics yabathengi, iwebhu, isoftware yezenhlalo, ukuxhumana okuhlanganisiwe, ithelevishini kanye nekhompiyutha yeselula esekwe ku-inthanethi konke kufinyelela ezindaweni ezibucayi eziletha ividiyo kokuvamile. Eminyakeni emithathu ezayo uGartner ukholelwa ukuthi ividiyo izoba uhlobo lokuqukethwe lwendawo evamile nemodeli yokuxhumana yabasebenzisi abaningi, futhi ngo-2013, ngaphezu kwamaphesenti angama-25 wokuqukethwe abasebenzi abakubonayo ngosuku kuzophathwa izithombe, ividiyo noma umsindo.
I-Next Generation Analytics - Ukwandisa ikhono lekhompyutha lamakhompiyutha kufaka phakathi amadivayisi eselula kanye nokwenza ngcono ukuxhumeka kunika amandla ukushintshwa kokuthi amabhizinisi azisekela kanjani izinqumo zokusebenza. Kuyenzeka ukusebenzisa ukulingisa noma amamodeli ukubikezela umphumela wesikhathi esizayo, kunokumane unikeze ngemininingwane ebheke emuva mayelana nokusebenzisana okwedlule, nokwenza lezi zibikezelo ngesikhathi sangempela ukuxhasa isenzo ngasinye sebhizinisi. Yize lokhu kungadinga ushintsho olubonakalayo kwingqalasizinda ekhona yokusebenza nokusebenza kwebhizinisi, amandla akhona okuvula intuthuko enkulu emiphumeleni yebhizinisi nakwamanye amazinga empumelelo.
Izibalo Zomphakathi - Komphakathi analytics ichaza inqubo yokulinganisa, ukuhlaziya nokuhumusha imiphumela yokuxhumana kanye nokuhlangana phakathi kwabantu, izihloko nemibono. Lokhu kuhlangana kungenzeka kwizicelo zesoftware yomphakathi ezisetshenziswa emsebenzini, emiphakathini ebheke ngaphakathi noma ngaphandle noma kuwebhu yezenhlalo. Komphakathi analytics igama lesambulela elihlanganisa amasu amaningi wokuhlaziya akhethekile njengokuhlunga umphakathi, ukuhlaziywa kwenethiwekhi yokuxhumana nabantu, ukuhlaziywa kwemizwa kanye nemithombo yezokuxhumana analytics. Amathuluzi wokuhlaziya inethiwekhi yezenhlalo ayasiza ekuhloleni ukwakheka komphakathi kanye nokuncika kanye namaphethini womsebenzi wabantu, amaqembu noma izinhlangano. Ukuhlaziywa kwenethiwekhi yezenhlalo kubandakanya ukuqoqa idatha emithonjeni eminingi, ukukhomba ubudlelwano, nokuhlola umthelela, ikhwalithi noma ukusebenza kobuhlobo.
Context-Aware Computing - Izikhungo zekhompiyutha ezazi ngomongo kumqondo wokusebenzisa imininingwane mayelana nomsebenzisi wokugcina noma imvelo yento, ukuxhumana kwemisebenzi kanye nokuncamelayo ukuthuthukisa ikhwalithi yokuxhumana nalowo msebenzisi wokugcina. Umsebenzisi wokugcina angaba yikhasimende, uzakwethu webhizinisi noma isisebenzi. Isistimu eyazi ngokomongo ilindela izidingo zomsebenzisi futhi isebenza ngokufanelekile ngokuqukethwe, umkhiqizo noma insizakalo efaneleke kakhulu futhi eyenziwe ngezifiso. UGartner ubikezela ukuthi ngonyaka we-2013, ngaphezu kwesigamu sezinkampani ezingama-Fortune 500 zizoba nezinhlelo zokuqonda ngomongo bese kuthi ngonyaka we-2016, ingxenye eyodwa kwezintathu zokumakethwa kwabathengi abangomahamba nendlwana emhlabeni wonke ibe isekelwe ekuqwashiseni ngomongo.
Inkumbulo Yesigaba Sokugcina - UGartner ubona ukusetshenziswa okukhulu kwememori ye-flash kumadivayisi wabathengi, okokuzijabulisa nezinye izinhlelo ze-IT ezishumekiwe. Ibuye inikeze ungqimba olusha lobukhosi besitoreji kumaseva nakumakhompiyutha amaklayenti anezinzuzo ezibalulekile - isikhala, ukushisa, ukusebenza nobulukhuni phakathi kwabo. Ngokungafani ne-RAM, inkumbulo enkulu kumaseva nakuma-PC, imemori ye-flash iyaphikelela noma amandla esuswa. Ngaleyo ndlela, kubukeka njengokushayela kwediski lapho kubekwa khona ulwazi futhi kufanele kusinde amandla-phansi nokuqalisa kabusha. Ngokunikezwa kwe-premium yezindleko, ukumane wakhe ama-solid state disk drive kusuka ku-flash kuzobopha leso sikhala esibalulekile kuyo yonke idatha esefayilini noma ivolumu yonke, kuyilapho ungqimba olusha olubhekiswe ngokusobala, hhayi ingxenye yohlelo lwefayela, luvumela ukubekwa okuhlosiwe kuphela kwe- izinto ezinemininingwane ephezulu edinga ukuzwa ukuxubana kokusebenza nokuphikelela okutholakala ngememori ye-flash.
Ikhompyutha etholakala yonke indawo - Umsebenzi kaMark Weiser nabanye abacwaningi eXerox's PARC uveza isithombe segagasi lesithathu elizayo lekhompyutha lapho amakhompiyutha afakwa ngokungabonakali emhlabeni. Njengoba amakhompyutha anda futhi njengoba izinto zansuku zonke zinikezwa amandla okuxhumana namathegi e-RFID nabalandelayo, amanethiwekhi azosondela futhi adlule isikali esingalawulwa ngezindlela ezijwayelekile zendabuko. Lokhu kuholela ekuthambekeni okubalulekile kokufaka amasistimu wekhompiyutha kubuchwepheshe bokusebenza, noma ngabe kwenziwa njengobuchwepheshe bokuthula noma obulawulwa ngokusobala futhi obuhlanganiswe ne-IT. Ngaphezu kwalokho, isinikeza umhlahlandlela obalulekile wokuthi yini esingayilindela ngamadivayisi akhulayo, umphumela wokuthengwa kwabathengi ezinqumweni ze-IT, kanye namakhono adingekayo azoqhutshwa ingcindezi yokwehla kwamandla emali okusheshayo ngenani lamakhompyutha kumuntu ngamunye.
Ingqalasizinda Esuselwa Kwindwangu Namakhompyutha - Ikhompiyutha eyakhiwe ngendwangu iyindlela esezingeni eliphansi yekhompyutha lapho uhlelo lungahlanganiswa khona kusuka kumamojula ahlukene wokwakha-block axhunywe phezu kwendwangu noma indiza yangemuva eshintshiwe. Ngendlela yayo eyisisekelo, ikhompiyutha eyakhiwe ngendwangu iqukethe iprosesa ehlukile, inkumbulo, i-O / O, namamojula wokulayisha (i-GPU, i-NPU, njll.) Exhunywe kuxhumano olushintshiwe futhi, okubalulekile, isoftware edingekayo ukumisa nokuphatha izinhlelo (ezi) ziphumela. Imodeli yengqalasizinda esekwe ngendwangu (i-FBI) ifaka izinsiza zomzimba - ama-processor cores, i-bandwidth yenethiwekhi kanye nezixhumanisi nokugcinwa - kumachibi ezinsizakusebenza aphethwe yi-Fabric Resource Pool Manager (i-FRPM), ukusebenza kwesoftware. I-FRPM yona iqhutshwa yingxenye yesoftware ye-Real Time Infrastructure (RTI) Service Governor. I-FBI ingahlinzekwa ngumthengisi oyedwa noma iqembu labathengisi abasebenza ngokubambisana, noma ngomhlanganisi - wangaphakathi noma wangaphandle.
I-Zeitgeist Emangalisa Kakhulu Yonyaka